Siifsiin – siifsiin
Guyyaa Addunyaa kan Dubartotaa
Guyaan Addunyaa kan Dubartootaa waggawaggaatti Bitootessa 8 tti kabajama. Guyyaa kana biyyootni addunyaa baayeen milkaa’ina ajaa’ibaa kan dubartootaa jireenya keessatti bifa adda addaatiin argame kabaju. Bu’aa jireenya keessaa qofa osoo hinn taane hawaasaa keessatti gumaacha guddaa isaa argamsiisanis ni kabaju. Kana malees guyyaan kun dubartoontni dandeettii isaaniitti akka fayyadaman kan dandeessisu guyyaa walqixximmaa koorniyaa addunyaatti mirkaneessuuf tarkaanffii fudhachuu qabnu itti … Continue reading Guyyaa Addunyaa kan Dubartotaa
March 8, 2019 March 13, 2019 Leave a comment
Maadiibaa – Abbaa Gaarummaa
Goota... ijoollummaadhumaa jalqabee gosa isaanii keessatti hooggansaaf kaadhimamaa ture, Neelsan Maandeellaan: ALA bara 1918 Kibba Bahaa (Afrikaa kibbaa) ganda baadiyaa Veezooo jedhamtu iddoo addaa Tiraaniskeetti dhalatan. Maqaan maatiinsaanii moggaasaniif Rolihlaahilaa Dalibhunga Maandeellaa jedhama. Hiikni maqaasaaniimmoo damee mukaati, hiika ‘jeeqaa’ jedhus akka qabu ni himama. Sana booda waggaa torbatti mana barumsaa seenan. Maatiisaanii keessaas namni yeroo … Continue reading Maadiibaa – Abbaa Gaarummaa